Madaxweynaha dowlada Puntland oo Muqdisho kula kulmay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandMadaxweynaha dowlada Puntland oo Muqdisho kula kulmay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya
August 6, 2016 Abdi Omar Bile Jubaland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo kulan la qaatay safiirka Turkiga Olgan Bakar.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Sabti ah magaalada Muqdisho kula kulmay safiirka dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Bakar.
Kulanka ayaa ka dhacay xarunta safaarada Turkiga uu ku leeyahay caasimada Soomaaliya, Muqdisho.
Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada Puntland, kulanka ayaa diirada lagu saaray arrimo la xiriira xaalada uu ku jiro dalka Soomaaliya iyo mashaariicda ay dowlada Turkiga ka fuliso dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo safiirka ayaa waxay si qoto dheer uga wadahadleen mashaariicda horumarineed ee Turkiga ka wado dalka Soomaaliya iyo sidii Puntland loo gaarsiin lahaa qaybteeda.
Turkiga ayaan wax mashaariic ah ka fulin deegaanaada Puntland tan iyo markii uu bilaabay sanadkii 2012-ka mashaariicda horumarineed ee uu Soomaaliya ka fuliyo.
Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa wadanka saddexaad oo hela mashaariicda horumarineed ee Turkiga tan iyo 2012-kii.